I iminyuziyamu best laseStavropol: incazelo
Indawo okwakhiwe kuyo laseStavropol iqhele, wadlulela Russia ngenxa kokusayina isivumelwane waseTurkey ngo-1774. Umuzi ikhona emaweni kwemithambeka egqumeni futhi elula ngoba eziyishumi amakhilomitha, ngakho ukuhamba kulo - ke okungukuthi kubenzima. Uma kuwukuzikhohlisa akunakugwenywa ke ikhambi elingcono kakhulu ukuhlola izingosi eziningi balondolozwa. Ngokwesibonelo, iminyuziyamu laseStavropol.
Yini ukutshela ngomlando esifundeni zijabulisa, ekhululekile futhi olunothile, uma kungekhona art? Kusukela zisencane, sizama ukugxilisa uthando isiko futhi uchaze ukuthi yini iwusizo ukuvakashela izikhungo ezifana. Zonke ziphephile kukhona iminyuziyamu ehlukahlukene laseStavropol. Thina sipho ekuhlaziyeni okubaluleke kunakho kubo.
Museum lwazi lendawo
Umlando yomlando wendawo Museum laseStavropol waqala Februwari 24, 1905. Ngaleso sikhathi, kwaba ukusungulwa North eCaucasus. Kusukela ekudalweni kwayo ikhanda kwaba sobala Grigoriy Nikolaevich Prozritelev. Kwaphela isikhathi eside Museum ihlangene ne Izibalo Committee sifundazwe laseStavropol.
Esichasiselweni sakhe esithi eqoqwe ziphephile eyigugu ecishe ibe yizinkulungwane 300. Ezingeni kwembulunga yonke chungechunge kwezazi ezibalulekile futhi curiosities yayo. Lokhu ezingavamile amandla cetotherium whale, elasmotherium obhejane, 2 5 ezatholakala eningizimu indlovu amathambo emhlabeni. Emkhakheni wezingalo umlando engokwemvelo isithakazelo abalulekile kwezesayensi: Botanical, entomological, etshalwe kanye nokuqoqwa mineralogical. Engamaphesenti angu-40 Museum ubuye ingobo yomlando kwempahla izithombe documentary, okwembula ngokugcwele wonke umlando wekhulu XX.
Museum of Ubuciko
LaseStavropol Fine Arts Museum kwavulwa ngo-December 1961 futhi wavula iminyango zayo ukuba zivakashe ngoNovemba 1962. Umqondo indalo yayo kungokwalabo ibhodi egatsheni laseStavropol we RSFSR Union of Abaculi, futhi art umhlaziyi A. B. Bendiku. Indawo egcina amagugu esizwe elise izingxenye mlando emadolobheni kuhlanganisa exhunyiwe kwelinye Ensemble izakhiwo ezintathu abamele lesikhumbuzo yezakhiwo obaluleke kakhulu ezweni.
Kuze kube namuhla, lezi zakhiwo ezintathu esivelele kulo mnyuziyamu main zobuciko ezingokomlando etholakala engxenyeni ephakathi ye edolobheni. Indawo nemibukiso lutho iye yashintshwa yaba amahholo amabili amakhulu embukisweni, lapho imihlangano YeSizwe nge kwezethulo, izinkulumo, izingqungquthela kanye nezingxoxo. Ngaphezu kwalokho, Museum ine egumbini lalo yesayensi ukufunda, izimali zazo, uma thina afingqa, zikhona izincwadi ezingaphezu kuka eziyizinkulungwane ezintathu. Konke lokhu kusiza Museum ahluke.
Amaqoqo laseStavropol iminyuziyamu ukunikeza ithuba umgomo umkhondo ukuvela zobuciko kanye zamasiko esifundeni amakhulu eminyaka, ngoba ukumboza umlando BC V leminyaka ukuba 1990. Ngemva kokuvakashela iminyuziyamu ofakwe izenzakalo ezidlule, ungahlala beshintsha isimo futhi kujulise nothando lwakho art ngayo yonke inhliziyo yami. Isikhungo esikhulu nezokuphatha laseStavropol Territory has lenqwaba ziphephile kubukiswe ngayo eminyuziyamu edolobheni. Isenzakalo esidume kunazo zonke zomlando lempi embukisweni izikhungo, zobuciko, kanye nezindawo zosizo ezikhethekile. Phakathi kwabo: Museum of umlando we Cossacks, "Umhlaba amabhokisi," Museum of ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe.
Abaculi inothi: graffiti Wabasaqalayo ephepheni
Indlela ukudweba Daisy: imfundo
Portrait of Gorkogo Maksima. Valentin Serov
Ukufunda indaba eqanjiwe eqenjini 2 abasebasha: uhlu imisebenzi
Kanjani ukuze uthole amaphesenti angu-13 ngokuthenga kwe ifulethi? Ukubuya 13% ngokuthenga kwe zokuhlala
Abakhiqizi eziphezulu Russian amahora